वितरणमुखी शिक्षा बजेट : १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा वितरणमुखी शिक्षा बजेट : १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आव २०७६/७७ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई रू. १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालू आवको विनियोजित बजेटभन्दा २९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरि जोड दिएको दाबी गरेका छन् । संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि आगामी आवमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा मात्र गरिएको छ ।
विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुला विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले आव २०६६÷६७ देखि नै २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलनको घोषणा गर्दै आएको कार्यक्रमलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्दै ७० ओटा जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने घोषणा गरिएको छ । मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने घोषणा यो बजेटमा पनि उल्लेख छ ।
नयाँ कार्यक्रमको रूपमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । साथै नयाँ कार्यक्रमको रूपमा ‘एक विद्यालय: एक खेलकुद शिक्षक’ व्यवस्थाको थालनी गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । यस कोषका लागि मात्रै ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी विसं २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन र कक्षाकोठा निर्माणका लागि रू. ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको, तर पूरा गर्न नसकेको विपन्न र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने घोषणालाई निरन्तरता दिइएको छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिका लागि रू. ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्सांकन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा क्रमशः ३ सय, ६ सय र १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत थप टेवा पु¥याउन रू. ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वैच्छिक रूपमा शिक्षण स्वयंसेवक खटाइने भएको छ । नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रू. २ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न शीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरू गर्न रू. २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने भएको छ । विद्यालयहरूलाई अपांगतामैत्री बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजारसहित २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउन रू. ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजाबापतको रकम बालबालिकाका आमामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ । सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न शीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रू. १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक शीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रू. १७ अर्ब ६४ करोड पु¥याएको छ । विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।